कांग्रेसलाई सिध्याउन कम्युनिस्टको ठूलो डिजाइन, जागरणले ‘ज्यान’ भर्ने मौका::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
– अनुराग शाह प्रकाशित : बुधबार, बैशाख २५, २०७६
बाम गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा खासै राम्रो नतिजा नल्याएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेको छ ।
कांग्रेसले जनताले दिएको यो भुमिका राम्रो सँग निभाएर अहिलेको वर्तमान सरकारको खबरदारी गर्न र देशलाई समृद्धि अनि बेरोजगारमुक्त बनाउन आफ्ना एजेन्डा बनाउन जरुरी छ ।
कांग्रेसले सुरु गरेको यो जागरण अभियानले त्यतातिर ध्यान दिन सके आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त गर्न खासै संघर्ष गर्नुपर्दैन तर कांग्रेसले सुरु गर्न थालेको जागरण अभियानले झगडाको बिउ रोप्न थाल्यो भने कांग्रेस अहिलेको अवस्थाबाट झन तल्लो अवस्थामा झर्न सक्छ ।
त्यसैले हामीले यो जागरण अभियानमा एक अर्काको आलोचना गर्न भन्दा पनि कांग्रेस बलियो बनाउन तिर समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी कांग्रेसलाई समाप्त पार्न योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको छ ती योजनाहरुलाई परास्त पार्न कांग्रेसले आफ्ना रणनीति यसपटकको जागरण अभियानबाट बनाउनुपर्छ ।
देशमा घटेका चर्चित वाइडबडी काण्ड र बालुवाटार काण्डमा जसरी सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाउन विपक्ष दलका नेताको नाम जोड्यो त्यसले पनि प्रष्ट पार्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कांग्रेसलाई समाप्त पार्न ठूलै डिजाइन गरेको छ । रोचक र आश्चर्य लाग्ने प्रसंग के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवको नाम बालुवाटार प्रकरणमा जोडिँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु उनको बचाउ गर्नतिर रोइकराई गर्छन् भने त्यो काण्डलाई ढाकछोप गर्ने मुख्य हेतुका साथ योजनाबद्ध रुपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिँदा भने आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता देउवाको विरुद्ध लाग्छन् । यो परिपाटीले कांग्रेस कहाँ पुग्ने हो ? त्यसको सोच विचार गुटका नाममा शेरबहादुर देउवालाई बदनाम गर्नेहरूले गर्न जरुरी छ ।
यदि हामीले त्यही परिपाटीलाई निरन्तरता दिने हो भने पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई त हराउन सकिएला । तर कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा हार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
कस्तो बन्ने कांग्रेस ? के–के हुनसक्छन् अबका एजेन्डाहरू ?
नेपाली कांग्रेस पार्टी कस्तो बन्ने र कस्ता एजेन्डा बोक्ने भन्ने कुरा अबको जागरण अभियानबाट निर्धारण गर्नुपर्छ । कांग्रेस भित्र प्रमुख कुरा त अनुशासन नै छैन । यो अनुशासन भन्ने कुरा पसल बाट किनेर ल्याएर दिने कुरा पनि हैन र गुटका नाममा राजनीति गरेर आउने कुरा पनि हैन । सबैले एकपटक जिम्मेवार भएर छातिमा हात राखेर, आँखा चिम्लेर सोचौ मैले गरेका क्रियाकलापले पार्टी बलियो भएको छ कि छैन । उत्तर पक्कै पनि छैन भन्ने आउने छ ।
त्यसपछि हामीले त्यही उत्तरलाई आत्मसात गरेर अनुशासनमा बस्न सिकौं । यदि यो परिपाटी हामी कार्यकर्ताले अपनाउन सकेनौ भने भर्खर बनेको अनुशासन समिति निर्मम ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । पार्टी बलियो बन्न एकता जरुरी छ र एकताका लागि अनुशासन । त्यसैले हामी अनुशाशित भए मात्रै कांग्रेस राम्रो बन्ने छ । अब एजेन्डाका कुरा गरौं । कर्णालीमा रुघा लागेर ९ जनाको मृत्यु, बझाङको पुलिस चौकीमा चमलको अभाव, धेरै पछि भात खान पाउँदा पुलिस हर्षित। आजभोलि राष्ट्रिय दैनिको पहिलो पृष्ठमा आउने दिनहुँका समाचार यस्तै हुन्छन् ।
यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न हामीले के गर्न सक्छौं ? त्यो विषयमा गम्भीर भएर सोचेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ र समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । अहिले पनि जाजरकोट रुकुम, डोल्पा लगाएतका जिल्लामा शिक्षाको पहुँच छैन । ती दुर्गम जिल्लाहरुमा शैक्षिक स्तरमा स्तरउन्नति गरेर शिक्षाको पहुँच पु¥याउन कांग्रेसले शैक्षिक जागरण अभियान चलाउनुपर्छ । तराईका जिल्लाहरूमा डाक्टरहरूबाटै महिला हिंसा भएको घटना बाहिर आएका छन्, ती घटना रोक्न तराईका जिल्लामा दाइजो प्रथा र महिला हिंसा अन्त्यको अभियान चलाउन सक्नुपर्छ ।
हामी सत्ता बाहिर भएकाले सकेसम्म राजधानी केन्द्रित कार्यक्रमभन्दा राजधानी बाहिर केन्द्रित कार्यक्रम गरेर जनतालाई विश्वास दिलाउन जरुरी छ कि अहिलेको सरकार भ्रष्ट छ र अब भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न देशमा कांग्रेस चाहिन्छ भनेर । हामी अधिकांश नेपालीहरु कृषिमा निर्भर छौं । तर पनि हामिले बाहिर बाट आयात गर्दा कृषिजन्य सामान बढिनै आयात गर्छौं । यो सुन्दा जति लाज लाग्छ भन्दा त्यो भन्दा दुई गुन लाज लाग्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले कृषिमा क्रान्ति गर्न आगामी एजेन्डालाई कृषि प्रधान बनाउन पनि आवश्यक छ ।
जापानसँग श्रम सम्झौता गर्दा खुशी हुनुपर्ने, मलेसियाको बन्द भएको भिजा खुल्दा रमाउनुपर्ने जुन अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ, त्यसले केही समय त हामीलाई खुशी पक्कै देला तर जब हामी ५० वर्ष माथि उमेर नाघ्छ, त्यसपछि जति खुशी जापानसँग श्रम सम्झौता हुँदा र मलेसियाको भिजा खुल्दा भएका थियौं त्योभन्दा धेरै दुःखी ५० बर्ष नाघ्दा हुन्छौं । किनकि त्यतिबेला न हामीसँग पाखुरामा बल हुन्छ न केही गर्ने सिर्जनशीलता हुन्छ ।
त्यसैले सकेसम्म विदेश पलायन हुने प्रचलनलाई रोक्न स्वदेशमै रोजगार कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यो विषयमा पनि कांग्रेसले आफ्नो प्रष्ट एजेन्डा बनाउन जरुरी छ ।